Patchwork quilts: fikradaha, sida loo sameeyo tallaabo-tallaabo iyo halka laga soo iibsado
Mid ka mid ah shaqooyinka asalka ah ee aan ku heli karno mahadsanid farsamada qoqobo waa quils. Sannado badan ayaa ka dambeeya, markaa hadda waa inaan hoos u dhaadhacno shaqada in aan awoodno in aan soo bandhigno xayndaabkeenna, kaas oo had iyo jeer noqon doona mid gaar ah oo asal ah. Labada kuwa leh sariir labajibbaaran iyo dhalinyaro ama ilmo.
VIVILINEN Sariiraha sariiraha...
Sida loo sameeyo patchwork quils tallaabo tallaabo
Maxaan u baahanahay si aan u sameeyo Patchwork quilts?
Inta aadan tagin sida loo sameeyo quils, waxa fiican in laga bilaabo agabka aan isticmaaleyno. Ma adka in la helo, maadaama qaar badan oo naga mid ah ay ku haysan doonaan guriga iyo kuwa kale, waxaan ka heli doonaa dukaanka dharka ama haberdashery.
haro dhar ah: Mar haddii aan samayn doonno suufkayaga, markaa waxaan ku dari karnaa dhammaan kuwan qaybo maro ah in aan guriga ku hayno. Waxaad isku dari kartaa midabada ama qaababka, ilaa inta ay yihiin kuwa aad jeceshahay. Xitaa waxaad samayn kartaa isku darka noocyo kala duwan oo dhar ah sida go'yaal ama qaybo denim ah.
Waxaan sidoo kale u baahan doonaa maro loogu talagalay xuubka gogosha, iyo sidoo kale toladeeda.
Buuxinta Sidoo kale waa muhiim, sidaas darteed waa in lagu xisaabtamaa sida mid kale oo ka mid ah walxaha aasaasiga ah.
Mashiinka tolida, dunta, biinanka iyo maqasyada waa walxaha kale ee lagama maarmaanka ah. Horay ma u wada haysataa?
Sida loo sameeyo quils tallaabo tallaabo
Waa lagama maarmaan in la gooyo dharka labajibbaaran. Cabbirka labajibbaaran waxay noqon doontaa ilaa 24 sentimitir. Sidaa darteed gogosha qiyaastii 210 m, waxaan u baahan doonaa ilaa 120 labajibbaaran oo dhar ah. Taasi waa, waxaanu u samayn doonaa sariir weyn ama laba jibbaaran. Laakiin macquul ahaan, waxaad mar walba la qabsan kartaa sariirta aad rabto.
Marka aan leenahay gooyay marada, had iyo jeer way fiicantahay samee nooc sawir-gacmeed. Taasi waa, dhig labajibbaaran oo dhar ah dhulka ama meel kasta. Sidaa darteed, waxaan heli doonaa fikrad ah natiijada kama dambaysta ah waxaanan la qabsan doonaa midabada ama qaababka sida aan jecelnahay.
Waxaan qaadan doonaa dhammaan safka sare ee afar geesoodka oo aan toli doonno. Waxaan ku samayn doonaa si la mid ah safafka xiga. Natiijo ahaan, waxaan heli doonaa dhowr xabbo oo dhaadheer. Si aan u sii wadno koofiyaddayada Patchwork, waa inaan dhammeyn doonaa tolo xariijimaha. Xasuusnoow mar haddii uu yahay koofiyad, waa in ay noqotaa mid adkeysi leh. Markaa waxaanu samayn doonaa tolmo xooggan.
Waxaad gooyn kartaa qaybo ka mid ah oo lagu toli doono cidhifyada. Waxa laga yaabaa inay qaar haystaan 4 ama 5 sentimitir ballac ah. Intaa waxaa dheer, waxaad dooran kartaa in aad doorato midabyo ka soo horjeeda kuwa dharka.
Waxaad u baahan tahay suuf khafiif ah (kaas oo u adkaysta sida dareenka, inkastoo uu ka dhumuc weyn yahay) ama maro (kaas oo ka dhumuc weyn kii hore).
Haddii aan hore u haysanay maro tolsan iyo walxo, Waxaan u baahanahay oo kaliya maro wax yar ka weyn roodhida taas oo u adeegi doonta dhinaca kale. Waxaan ku biiri doonaa saddexdan qaybood mahad biinanka. Dabcan, had iyo jeer ka tag meel bannaan oo tolmo ah. Sidoo kale, kiiskan, waa inaad ka tagtaa qayb furan si aad awood ugu yeelatid inaad soo rogto.
Markaynu ka soo rognay koofiyadda, waa inaynu tolnaa qaybta ama dhinaca u dambeeya. marka aad hore u leedahay geesaha si fiican loo tolayWaad dhammayn doontaa shuqulkaagii weynaa.
Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad sameysid quilt, waxa fiican inaad ku bilowdo mid fudud iyo mid yar, tusaale ahaan ilmaha. Waxoogaa yar, camal ahaan waxaad u gudbi doontaa kuwa kale oo cabbirro badan leh.
casri ah iyo dhalinyaro
Qolalka dhallinta, ma jiraan wax la mid ah doorashada roogagga Patchwork ee casriga ah oo leh dhawaaqyo dhallinyaro ah ama sawirro. Sidan oo kale shaqada waxaa mar walba heli doona kan ugu yar guriga. Intaa waxaa dheer, waxay isku dari doontaa qolalka jiifka ee asalka ah.
Dhammaan xirmooyinka balastarrada ah ee aad hoos ku arki doonto waxaad ka iibsan kartaa halkan.
Carruurta iyo dhallaanka
ka sariiraha ilmaha Way ka yar yihiin, jilicsan yihiin oo aad u daboolan yihiin, laakiin kama tagin midabyo madadaalo leh ama daabacado taas. Xaaladaha qaarkood, waxaan sidoo kale ku dari karnaa asal ahaan dhinaceena. Sababtoo ah qaybaha marada, waxaan ku dhejin karnaa magaca kan yar ama taariikhda dhalashada. Halka carruurta, waxaad ka heli doontaa midabyo badan oo midab leh oo ka buuxin doona qolalkooda iftiin.
Qalabka Patchwork ee guurka ayaa yeelan doona cabbirro kala duwan, marka loo eego baahiyahaaga. Quruxda iyo asalka ayaa sidoo kale lagu daraa daabacaadda ubaxa iyo midabada aasaasiga ah.
Halkee laga soo gadan karaa quilts Patchwork
Haddii aad rabto inaad iibsato shaqadii hore loo qabtay, markaa sidoo kale waad awoodaa. Soo iibso suufka Patchwork Way ka sahlan tahay sidaad malayn karto. Dhinaca kale, waxaan leenahay dukaamada online. Shaki la'aan, waa ikhtiyaar weyn inaadan ku dhibin inaad meel ka baxdo oo meel kale aado. Goobaha sida Amazon waxay leeyihiin buug-yaraha ballaaran. Midabo kala duwan iyo daabacado, dhammaan cabbirrada sariiraha, laga bilaabo labanlaab ilaa dhallinta iyo sariiraha.
Intaa waxaa dheer, dukaamada fashion in aynu wada ognahay, sidoo kale waxay leeyihiin a qayb loogu talagalay qurxinta iyo guriga. Iyaga, waxaan had iyo jeer ka heli doonaa fikrado kuwan oo kale ah. Sababtoo ah Patchwork quilts sidoo kale waa isbeddel weyn oo aan waligood ka bixi doonin qaabka. Ugu dambeyntii, dukaamada dharka iyo dukaamada waaweyn, waxaan sidoo kale ka heli karnaa noocyo kala duwan oo shaqadan ah.
Iibso - Faafida sariirta shaqada
Mashiinka dharka » Patchwork quils